कांग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापा कोरोना संक्रमित भएपछि… – PathivaraOnline
Home > समाचार > कांग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापा कोरोना संक्रमित भएपछि…
admin October 3, 2020 समाचार, स्वास्थ्य	0
काठमाडौं नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी र गगन थापासहित ६ जना नेतालाई कोरोना पुष्टि भएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठक अघि कांग्रेसले गरेको स्वाब परीक्षणमा उनलाई कोरोना पुष्टि भएको हो। ‘मलाई कोरोना पुष्टि भएको छ,’ मिडिया डबलीसँग कुरा गर्दै थापाले भने, ‘मलाई कुनै लक्षण देखिएको छैन। स्वास्थ्य सामान्य छ।’
काठमाडौमा शनिवार विशिष्ट ब्यक्तिहरुमा कोरोना पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्रीका स्वकिय सचिव सहित नीजि सचिवालयका ४ जनालाई पनि कोरोना पुष्टि भएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता केसी र थापा सहित काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शम्भूलाल श्रेष्ठ, अनिता चौधरी, लगायतलाई कोरोना पुष्टि भएको हो ।
आगामी असोज १९ गते बस्न लागेको केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि गरिएको गत बिहीबार नेताहरुको स्वाब परिक्षण गरिएको थियो । सो क्रममा उनीहरुलाई कोरोना पुष्टि भएको हो । तर नेता केसीले आफुलाई कोरोना पुष्टि भएको बारे पार्टीले आधिकारीक जानकारी नदिएको बताएका छन् । आफुले पनि मिडियावाट त्यसको जानकारी पाएको भन्दै दुख ब्यक्त गरेका छन् ।
कोरोना पुष्टि भएपछि पार्टीले सम्बन्धित ब्यक्तिलाई जानकारी दिने हो की ? मिडियालाई दिने हो ? उनले रुष्ट हुँदै भने । नेता केसीले आफुलाई कोरोनाको कुनै लक्षण भने नदेखिएको बताएका छन् । कोरोना पुष्टि भएको बारे मिडियावाट जानकारी पाए लगत्तै आफु होम आइसोलेसनमा बसेको बताएका छन् ।
नेता केसी लगायतका कांग्रेसका नेताहरुले आफुहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुलाई पनि कोरोना परिक्षण गर्न र सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । नेता थापा पनि कोरोना पुष्टि भएको जानकारी पाए लगत्तै आइसोलेसनमा बसेको बताएका छन् । कांग्रेसले बिहीबार केन्द्रीय सदस्यहरुसहित केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी र नेताहरुका सुरक्षागार्डसहित २ सय ४१ जनाको स्वाब संकलन गरेको थियो । मीडियाडबली साभार
अब बाँचिँदैन कि जस्तो भो ! सुत्केरी भोकभोकै, खोइ राहत ?